ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ (၂၂-၁၁-၂၀၁၃)
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ (၂၂-၁၁-၂၀၁၃)
အင်တာနက် Connection ကတော. ဒီ သုံးစားမရတဲ.
အစိုးရ (ယုတ်မာတဲ.အစိုးရ) လက်ထက် ကောင်းလာဖို.
မမြင်ပေဘူး မောင်မင်း တို. ။